Labo gool oo uu dhaliyay Michu ayaa ka saaciday kooxda Swansea in muddo 30 sanadood ah ka dib ay ka badiyeen kooxda Arsenal | Blog
Sport Sport News Cricket Labo gool oo uu dhaliyay Michu ayaa ka saaciday kooxda Swansea in muddo 30 sanadood ah ka dib ay ka badiyeen kooxda Arsenal
Labo gool oo uu dhaliyay Michu ayaa ka saaciday kooxda Swansea in muddo 30 sanadood ah ka dib ay ka badiyeen kooxda Arsenal	Saturday, 01 December 2012 18:02	Axadle	man united
Cayaaraha \_ Horyaalada Labo gool oo uu dhaliyay Michu ayaa ka saaciday kooxda Swansea in muddo 30 sanadood ah ka dib ay ka badiyeen kooxda Arsenal oo marti loogu ahaa garoonka Emirates Stadium. Qeybtii hore ee ciyaarta ayay mar kale ciyaartoyda Gunners oorin kala kulmeen taageerayaashooda ka dib markii ay soo bandhigeen qaab ciyaareedkoodii lagu yaqiinay.
Iyadoo kooxda Swansea ay abuurtay qeybtii hore fursado ka badan intii ay abuurtay kooxda Arsenal oo marti loo ahaa. Iyadoo qeybtii hore ay ku kala nasteen labada kooxood barbaro goolal la’aan ah.
Arsenal ayaa qeybtii labaad ee ciyaarta ku bilaabatay si ka fiican sidii qeybtii hore, laakiin fursadihii ay heleen shabaqa lama aysan helin. Arsenal ayaana xaalada ay ku sii xumaatay markii Michu uu shabaqa ka soo taabtay daqiiqadii 87aad isagoo hogaanka u dhiibay kooxdiisa Swansea oo marti ku aheyd Emirates Stadium.
Xiddiga reer Spain Michu ayaa labo daqiiqo ka dib hadana gool kale ku aamusiyay jamaahiirta Arsenal isagoo guul u xaqiijiyay kooxdiisa Swansea. Guusha ay Swansea ka gaartay Arsenal ayaa ah tii ugu horeysay muddo 30 sannadood ah, halka Arsenal oo barbaro gashay labadii kulan ee ugu danbeysay ay soo gaartay guuldarro kale oo xanuun leh oo sii baab’ineysa rajadooda xilli ciyaareedkan ee horyaalka.
Swansea ayaa ka sarre martay Arsenal iyadoo u dalacday kaalinta 5aad iyagoo leh 23 dhibcood, halka Arsenal ay u dhacday kaalinta 10aad kala sareynta horyaalka. Dhinaca kale Manchester City ayaa taako kala kulantay kooxda Everton ka dib ciyaar ka dhacday Etihad Stadium oo ku soo idlaatay barbar 1-1 ah, waxaana ay ku dhibco noqdeen Manchester United balse United kulan ay xilli dhow la ciyaari doontaa Reading.
Everton ayaa hogaanka ciyaarta ku hormartay markii daqiiqadii 33aad uu kubad shabaqa ku hubsaday Felliani oo markaas uu Hart ka beeniyay kubad madax aheyd balse kubadii soo laabatay shabaqa cusjiyay.
Carlos Tevez ayaana kooxda difaacaneysa horyaalka Ingariiska u barbareeyay iyadoo labo daqiiqo ay ka harsan tahay xilliga nashada, isagoo dhaliyay rigoore, ka dib markii Dzeko qalad uu kula galay diilinta ganaaxa ciyaaryahan Felliani.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaana waxa ay labada kooxood ku kala nasteen barbaro gool iyo gool ah. Qeybtii labaad ayaysan waxba iska bedeli natiijada, iyadoo Manchester City ay heli weysay guushii ay dooneysay inay ku gaarto garoonkeeda.
Waxa ay haatan hogaanka Premier League ku hayaan farqiga goolasha madaama ay 33 dhibcood wada wadaagaan kooxda Manchester United oo wax yar ka dib marti u ah kooxda Reading.
Dhanka kale Gool uu madaxa ku dhaliyay Daniel Agger ayaa ka caawiyay Liverpool inay 1-0 kaga talaabsato kooxda Southampton oo marti ugu aheyd Anfield.
Kooxda Liverpool ayaa qeybtii hore ee ciyaarta kubada inteeda badan iska heysatay, waxaana ay weeraro joogta ah ku hayeen goolka kooxda Southampton. Iyadoo uu ku soo laabtay Lucas Leiva oo seddex bilood dhaawac kaga maqnaa.
Ciyaaryahanada Luiz Suarez iyo Jonjo Shelvey ayaa labo kubadood oo qatar ah waxaa ka beenisay birta, ka hor inta uusan Agger daqiiqadii 43aad madaxa ku dhalin karoos ka yimid Johnson. Iyadoo qeybtii hore lagu kala nastay 1-0 oo ay hogaanka ku heysay Reds.
Qeybtii labaad ee ciyaarta ayay Reds halkeeda ka sii waday kubada ay heysatay waxaana ay sii abuureen fursado kale inkastoo ay awoodi waayeen inay hogaanka sii dheereystaan.
Guushaan ay ka gaareen kooxda Southampton ayaana ka saacideysa in Liverpool ay soo gasho kaalinta 11aad iyagoo leh 19 dhibcood.
Xiddigooda Luis Suarez ayaa qaatay jaalihiisii 5aad ee xilli ciyaareedkan horyaalka, waxaana uu seegi doonaa kulanka ay u safrayaan kooxda West Ham.
Falaaqeynta Kulanka Derbiga Roma vs Juventus
Magaalada Caasimada ee Roma saacada marka ay taha 10:45 waxaa ka dhacaya Kulan darbi oo dh
Man utd oo 8 Qof kadib ku Dhirbaxo guuldaro ku Garsisay Garoonka Koxda Chelsea iyo Liverpool iyo everton oo dhibcaha qeybsadayKooxda Chelsea ayaa waxaa soo gaaray guul daraddii ugu horeysay horyaalka ingiriiska xilligan kadib John Terry ayaa Si lama filaan ah Xalay fiidkii ugu dhawaaqay in uu ka fariistay ciyaaraha caalamiga ahKabtankii hore ee wadanka Ingriiska John Terry ayaa ku dhawaqay in uu ka fariistay ciyaaraha heerka Arsen Wenger:Waxaan dareensanahay in kooxaha oo aan isku dheelitirin dhaqaalahooda, iskana bixin deymaha lagu leeyahay, inay keeni doonto waqti mugdi ah oo la galoTababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa dhaleeceeyay kooxaha boorsooyinka waa weyn ee qaarada y